I-Epidaurus, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Epidaurus
Bukela ividiyo ekhuluma nge-Epidaurus
I-Epidaurus ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ezitholakele zemivubukulo ekhombisa ubukhazikhazi besiko lamaGrikhi ngobuhle baso obuhle.
Ungahlola i-Epidaurus ukuthola ukuthi kungani yayaziwa ngendawo yayo engcwele ebangeni elingamakhilomitha amahlanu (8 km) ukusuka edolobheni, kanye nenkundla yemidlalo yaseshashalazini yayo, esetshenziswa kabusha namuhla, isiza samagugu emhlabeni se-UNESCO.
Izintaba ezintathu zakha umngcele ongokwemvelo ohlanganisa leli dolobha, uvikeleke emimoyeni futhi ulinikeza isimo sezulu esihle kakhulu. Amanzi acacile agijimayo, izindawo ezinhle zemvelo kanye nezimo zezulu ezizuzisayo zisebenzela ukudala indawo efanelekayo yokwelapha komuntu ngamandla onkulunkulu.
I-Asclepeion e-Epidaurus yayiyisikhungo sokuphulukisa esidume kakhulu emhlabeni we-Classical, indawo lapho abantu abagulayo babeya khona ngethemba lokuthi bazolapheka. Ngaphakathi nendawo engcwele kwakukhona indlu yezivakashi enamakamelo ezivakashi e-160. Kukhona futhi iziphethu zamaminerali eduze, okungenzeka kwakusetshenziswa ekwelapheni.
U-Asclepius, unkulunkulukazi obaluleke kakhulu wasendulo, waletha ukuchuma kwendlu engcwele, okwathi ngekhulu le-4th ne-3rd BC baqala uhlelo lokwakha oluzimisele ukwandisa nokwakhiwa kabusha kwezakhiwo ezinkulu.
Ngisho nangemva kokwethulwa kobuKristu nokumiswa kwama-orpent, ithempeli lase-Epidaurus lalisaziwa njengemuva maphakathi nekhulu le-5th njengesikhungo sokwelapha samaKristu.
Namuhla izikhumbuzo zalo ngaphandle kokuqashelwa njengeziqophamlando zobuciko basendulo bamaGrikhi nazo zimi ubufakazi benkambiso yomuthi wakudala. Babonisa ukuvela kwezokwelapha kusuka ngesikhathi lapho kwakukholelwa ukuthi ukuphulukiswa kuncike kuNkulunkulu kuze kube isikhathi lapho iye yathuthuka isayensi esekelwe olwazini oluhlelekile ngokusebenzisa isipiliyoni sokuqongelela.
Izindlela zokwelapha ezenziwa odokotela abangaqondakali zazicubungula kakhulu. Emakhulukhulu eminyaka wokubukwa kwemvelo, umzimba womuntu kanye nokuthembela kokuvumelana kwengqondo nempilo engokomzimba kudale umongo wezokwelapha oyinkimbinkimbi wokwelashwa, okubonakale kusebenza kakhulu.
Kuyo yonke le minyaka isipiliyoni sabaqoqekile sabaphristi, kanye nokuhlangana okusebenzayo kwesimo sezulu esingenakuqhathaniswa nendawo yezemvelo yezwe, kwaholela ekwelashweni kwezokwelapha okuphumelela kakhulu. Lokhu kuholele esixukwini sangempela sabavakashi abafuna ukwelashwa, hhayi ngaphakathi kuphela Greece, kepha futhi abavela emazweni akude.
Umsebenzi ngamunye owenziwa e-Epidaurus wenzelwa ukuvumelanisa ingqondo, umzimba nomphefumulo. Endaweni yemidlalo yezivakashi izivakashi zingaya emidlalweni bese “ziphunyuka” ezinkingeni zazo ezincane, eziqeda amandla nsuku zonke. Umculo, imidlalo yaseshashalazini, kanye nokufundwa kwemibhalo yefilosofi kwalungisa umphefumulo ukufeza ukuphulukiswa komzimba ekugcineni.
Isiguli, ngemuva kokuhlanzwa okudingekile futhi sesifinyelele esimweni esizolile nesiphumuzayo, yaholelwa endaweni eyinhloko yokwelapha, Abaton. Lesi kwakuyisakhiwo esakhiwe ngendlela engaqondakaliyo, esasinamakhorali angaqondakali nemizila eyindilinga eyinkimbinkimbi. Ukwakhiwa kwe-Asclepieion kusamangalisa nanamuhla. Lesi sakhiwo besiyindilinga, sibonisa ukuphepha nokuvikeleka kokumukelwa kukamama. Ukwakheka kwengcwele bekusebenzela ukugxila ekugxileni kweziguli nokuthola amandla emhlabeni wakhe wangaphakathi.
Ngesikhathi sekhulu lesine nelesithathu BC kwakhiwa izakhiwo zombili ezintabeni nasezindaweni ezingcwele; ithempeli laseClassical, i-altare lika-Apollo, i-Great Stoa, indawo yokuhlala yabaphristi kanye Amathani Ezingoma.
Ukuchuma okulethwe yi-asclepeion kunikeze amandla i-Epidaurus ukwakha izikhumbuzo zabantu, kubandakanya nemidlalo yaseshashalazini enkulu eyaziwa ngokulingana nobuhle bayo, esetshenziswa futhi namuhla emidlalweni emangalisayo.
Njengoba kujwayelekile kumidlalo yaseshashalazi yamaGrikhi, ukubukwa ebusweni okuxakile ngemuva kwesiteji
iyingxenye ebalulekile yemidlalo yaseshashalazini uqobo lwayo futhi akumelwe ibonakale. Ihlala abantu abangu-14,000.
Inkundla yemidlalo yaseshashalazini iyancomeka ngenxa yemisindvo yayo ehlukile, evumela cishe ukuba khona kwamagama angakhulunywa ngokuqondile ngaphandle kwesiteji kubo bonke ababukeli be-14,000, noma ngabe bahlala kuphi
Izici ezimangazayo ze-acoustic zingahle zibe ngumphumela wokuklanywa okuthuthukile: imigqa yezihlalo zamatshe angama-limestone ihlunga imisindo ephansi imvamisa, njengokububula kwesixuku, futhi iphinde ikhulise imisindo ephezulu yesikhathi.
Hlola i-Epidaurus ngokwakho ukuze uzwe neminye imilingo yayo.